DEG DEG: Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho – Benaadir News Network
DEG DEG: Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho (Caasimadda Online) – Dhawaqa qarax xooggan ayaa laga maqlay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Qaraxa ayaa wuxuu ka dhacay Isgoyska Ex-Control Afgooye ee Magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay inuu qaraxa fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa.
Qofka qaraxa isku soo xiray ayaa isku qarxiyay Goob laga raaco Gadiidka aada degmada Dharkeenleey, gaar ahaan isgoyska Macalin Nuur, isla markaana dhagxaan ay ku xireen laamaha Amniga Soomaaliya.
Qaraxa ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii ku sugnaa meesha uu qaraxa ka dhacay, inkastoo aan weli la helin tirada rasmiga ah.
Muddooyinki dambe waxaa magaalada Muqdisho kusoo badinayey dadka is qarxinayo ee ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay ciidamada Dowladda si weyn uga hor tageyn gawaaridii qaraxyada lagu fulin jiray ee soo geli jiray Magaalada.
Previous Somaliland oo amar culus dul-dhigtay musharraxiintii guuleystay + sababta
Next Xog: Tirada xubnaha laga saarayo guddiga doorashada ee cabashada laga keenay